शब्दकोश: July 2009
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, July 10, 2009 11 : Comments
सुकिलोमुकिलो आँगन छ,
आँगन भेट्ने वरिपरि फैलिएको चौबाटो पनि छ,
घरलाई 'घर' भनिन लायक बनाउने यसभित्र ओत लाग्ने जीवनहरू छन् ।
तर खै त खै
यसको ढोका कहाँ छ ?
कुरा उही देशको हो, आफ्नै देशको । देशको कुरादेखि फुर्सद पाए पो विदेशको, कहाँ न कहाँ आकाशिँदै गएको तिनको विकसित चालढाल र छलाङको कुरा गर्नु ! यही, कसैको आफ्नो हुन नसकेको टुहुरो देशलाई काखी च्यापेर निरीह भावमा हाम्रो भावनाको एक थान ज्यान खुसुसरखसुर घस्रिरहेछ, बिना उत्साह बिना चाख….।
छानो फाटेर कोठा नै हिलाम्य गह्रा बनेपछि रोपाइँमा घरछेउको पाखोबारी वा छिमेकको लाम्चे कित्तामा पर्म तिर्न जान कुनै सोचाइ फुर्दैन । यस्तै भएको छ नेपाल खाल्डोमा ।
कलाकार जे पापीले हालै एउटा साङ्गीतिक एलवम निकालेका रहेछन् - 'देशको काट्टो खानेहरू' । त्यसमै सँगालिएको एउटा गीतको बोलले भन्छ-
"रामलखन खोइ तेरो घरको ढोका
जो पसे'नि हुने जे गरे'नि हुने चाल्दै चोटा र कोठा ।
रामलखन खोइ तेरो घरको ढोका…. … "
घरमा ढोका नभएपछि कुँडेको दूध खाने बिरालो त यत्तिकै पनि पसिहाल्छ, घरमुलीको ज्यानै मिले बाघ पस्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । बिरालो भएर पसी बाघ हुनेहरूको धूर्त्याइँ पनि बुझिसाध्य हुँदैन । नेपाल नामको घरको हालत पनि करिब करिब त्यस्तै छ । घरमा ढोका छैन, यसैले 'धोका' दिनेहरूको पाइला यत्रतत्र मडारिएको छ यसको अन्तरकुन्तरमा ।
दुई ढुङ्गाबीचको तरूलको व्याख्या पाएको देशले सधैँ यसैको चिनारीलाई अपूर्व अनुकम्पा मानेर बसे झैँ लाग्छ । देशको कुरा गर्दा यसको नेतृत्व तहमा बसेकाहरूप्रति गुनासो, गाली र सत्तोसराप गर्नु निरन्तरको रीत हो हाम्रो । अरू त विकल्प नै के छ र ? डाडू-पन्यु हातमा भएका भान्सेलाई हो करकर गरिने -
त्यता अलि बढी भाग भयो,
उता अचार बासी परेछ, फ्याँक्देऊ
लाऽऽ भात त डढेर माम्री भएर खत्तम !
मलाई चाहिँ हेपेर हड्डी-हड्डी छानेर हालेको हो पख्लास् !!
भान्सेले हामीलाई के जवाफ दियो, के कुराले फकायो-फुल्यायो र शब्दजालमा सधैँ कस्तो आश्‍वासनको शृङ्खलाले झुलाइरह्यो, त्यो त हामीले भोग्दै आएकै छौँ । हामी अहिलेसम्म यस्तै शब्दजाल, लोलोपोतोले अघाएर सहनशीलताको सफल परीक्षा दिइरहेछौँ ।
काठमाडौँको कुनै कुनामा तिब्बतीहरूले दलाई लामाको जयगानसँगै चीनविरोधी नारा लगाउनासाथै चिनियाँ अधिकारीको मुटुमा सन्त्रासले ढ्याङ्ग्रो ठोक्छ । र राजदूत वा चिनियाँ अधिकारीको विशेष टोली तत्काल हाम्रा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूसँग सम्पर्क/भेटघाट गरी नेपालमा यसरी चीनविरोधी गतिविधि नहोस्, हामीलाई अप्ठेरो पर्छ भनेर गुनासो गर्छ । तत्काल नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय जागरूक बन्छ र ट्रकका ट्रक आन्दोलनकारी तिब्बतीहरू खोरमा पुग्छन्, चिनिया नियोगछेउछाउको सडक-क्षेत्र बटुवासमेत हिँड्न निषेध गर्नेगरी थुनिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक 'कब्जियत' हुन्छ, निकास केही खुल्दैन । सहयात्री दलबीचमै छेडखान र कट्टर मतविभेदले शिर उचाल्छ । अथवा सहमतिको प्रयास भइराखेको हुन्छ, तर ठोस निर्णयको लागि हाम्रा 'जननिर्वाचित' नेताजीहरूमा आँट पलाइरहेको हुँदैन । त्यसै बखत भारतीय राजदूत पारिबाट अचुक बुटी लिएर शाही ठाँटका साथ दलहरूका अड्डातिर तीर्थाटन गर्छन् । आफू-आफू सरसल्लाह गरेर मिल्न नसकेका रुस्ट पक्षलाई बाहिरका यी पाहुनाले खुशामद गर्दै जादुटुना लगाएर मनाउँछन्, विचित्र कोटिको अधिकार प्रयोग गरी भारतीय सूत्र मान्न दबाब दिन्छन् । यस्तैमा अड्किरहेको कुरा सुल्झिएर क्रान्तिकारी फैसला जनसमक्ष आउन अर्को आइतबार लाग्दैन । हामी जनता मक्ख पर्छौँ- देशमा राजाबाट जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता फर्कियो भनेर, लोकतन्त्र कायम भयो भनेर, ऐतिहासिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो भनेर ………।
यी दुई नमुनामा हामी जनता कति पैँतालामुनि छौँ, हाम्रो देश कुन घानमा पिसिएको छ ? सोध्न कतै गइरहनुपर्दैन, साक्षी आफ्नै आँखा छन् र मनले विमर्श गरी सत्य ओकलिदिएको छ । चीनलाई अर्काको देशमा आफ्नो विरोधमा नारा लाग्दा, जुलुस निस्किँदा हैरानीले छोप्छ, हनहनी ज्वरो आउँछ । उता भारत लाज न डर अर्काको मुलुकको कहिले खडेरीग्रस्त र कहिले बाढीग्रस्त राजनीतिक मौसममा स्वघोषित माझीदाइ बनेर दवाब र खुशामद थुपार्न कुनै साइत कुर्नुपर्देन । नयाँ-नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र गुटबन्दी खडा गरेर आफूअनुकूललाई रिझाएर सत्ताको चकलेट चुसाएर त्यसको पृष्‍ठभूमिमा शुभ लाभ गर्न बानी परिसकेको छ ऊ ।
यता बीचमा छ भाइकान्छो नेपाल । शोक न सुर्ता भोक न भकारी । यो उखान आपसी लुछाचुँडी र घोचपेचको दलदलमा मस्तराम दलहरूलाई नसुहाउने कुनै जुग भएन नेपालमा । सीमा मिचिँदा, साँध ताछिँदा, सीमापारिबाट मात्र होइन सात समुद्रपारिबाट दबाब करकाप सबै आएपनि आफ्नै ताल र लिँडेढिपीमा शक्तिको बल्छी थापेर छिर्के हान्ने अभियान पेवा भएको छ राजनीतिक नेताहरूको । सामाजिक अरू मुद्दाहरू यही राजनीतिक रडाकोबीचमा ओझेल-ओझेल छन् ।
कसैद्वारा सञ्चालित गोटी हुनमा परमानन्द मनाइरहेछन् नेताहरू । केही गर्नैनपर्ने, खेलिनुमा आफू ठेलिने कुरा अन्तर्निहित भएपछि हाइसन्चो नहोस् पनि कसरी ? आफ्नो घरको चाबी छट्टु छिमेकीकहाँ जिम्मा लगाएर धर्म आर्जन गर्ने र पवित्र हुने लहरमा भजन सुन्न चोक र बजार चहार्ने भरप्रसादको जस्तो हालत छ देश हाँक्ने नेताहरूको । धेरैजसो त एक थान घरसमेत हाँक्न नसक्नेहरू केही उपाय नलागेर राजनीतिको तिकडममा हेलिएका छन् । मानौँ कतै नबिक्नेहरू राजनीतिमा टिक्ने भने झैँ । लगातारको सपनामाथिको घात र सुनौलो सम्भावनाहरूको महान् अवसर आउँदा पनि दोहोरिरहने 'ल्यान्ते लीला'देखि आजित जनता थकित र हतास भएका छन् ।
यस्तोमा 'खोइ तेरो घरको ढोका' भनेर पनि कसलाई जागरूक बनाउने ? कानमा तेल होइन सेल पाकेर वारिपारि प्वाल ट्याप्प टालिएको छ सबैको । निजी राग र वैरागहरू छन्, राष्‍ट्रिय सपना छैन, देश त टुहुरो जस्तै छ- बेसहारा । आफ्नै खेल देखेर थपडी बजाउने हात मात्र बाँकी भएकाहरूसँग के कुरा गर्ने !!?
तर पनि यो धुन यतै-कतै अलमल्ल परिरहेछ -
ओइ रामलखन, खोइ तेरो घरको ढोका हँ ?????
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, July 07, 20097: Comments